Gaarsiinta Iibka: Lix Xeeladood oo guuleysta quluubta (Iyo Tilmaamo Kale!) | Martech Zone
Qorida waraaqaha ganacsiga waa fikrad dib ugu laabaneysa waagii hore. Waqtiyadaas, waraaqaha iibka jireed waxay ahaayeen isbeddel loogu talagalay in lagu beddelo suuqleyda albaab iyo albaabadooda. Waqtiyada casriga ahi waxay u baahan yihiin habab casri ah (kaliya fiiri isbeddelada ku jira xayeysiinta muujinta) iyo qorista waraaqaha iibka ganacsiga ayaan laga reebin.
Qaar ka mid ah mabaadi'da guud ku saabsan foomka iyo walxaha warqad iib ah oo wanaagsan ayaa wali la adeegsadaa. Taasi waxay tiri, qaabdhismeedka iyo dhererka warqaddaada ganacsi waxay kuxirantahay nooca dhagaystayaashaada iyo sheyga aad rabto inaad iibiso. Dhererka caadiga ah waa 4-8 baaragaraaf, laakiin way ka sii badnaan kartaa haddii alaabtaadu u baahan tahay sharraxaad sax ah, ama ka yar, dalabyo toosan oo toos ah.
Si kastaba ha noqotee, waxaan diiradda saari doonaa hacks waxtar leh oo kaa caawin kara oo keliya inaad xirto heshiisyada laakiin sidoo kale guuleysta quluubta dhagaystayaasha.
Istaraatiijiyadda 1: U adeegso otomaatiga si aad u shaqsiyeeysid Waraaqaha Iibinta Ganacsigaaga
Haddii aad rabto waraaqahaaga iibinta ganacsiga inay guuleystaan ​​quluubta, waxaad u baahan doontaa inaad siyaabo badan u istaagto. Marka hore, waxaad u baahan doontaa inaad hal-abuur yeelato oo aad wax shakhsiyadeed samayso. Diritaanka qoraalada gacanta lagu qoro waa hab fiican oo aad waraaqahaaga u diraan, si kastaba ha noqotee, u qoristooda shaqsi ahaan waxay qaadan kartaa waqti.
Nasiib wanaag, waad isticmaali kartaa a adeegga warqad gacmeed taas oo otomaatig ka dhigaysa geeddi-socodka oo dhan isla markaana ka dhigaysa qoraalkaagu inuu u muuqdo sidii ay u qortay gacan bini-aadam oo adeegsanaya qalin dhab ah. U dirista warqad ganacsi sidan oo kale ah, oo leh muuqaal soo jiidasho leh, qaab qoraal shaqsiyeed, waa hab fiican oo lagu kasbado qalbiga qaataha.
Istaraatiijiyadda 2: Ku dar Cadeyn Bulsheed oo Adag
Ma jiraan wax ka iibiya wax ka fiican sheyga loogu magac daray "nolosha-beddelaya" fikradaha iyo khibradaha kuwa isticmaalay. Taas macnaheedu maaha in alaabtaadu u baahan tahay inay noqoto mid kacaan ah, laakiin waa inay lahaato caddayn bulsheed oo xoog leh oo u qaabeysan codadka macaamiisha qanacsan.
Taasi waa sababta ay u fiicantahay in lagu daro caddeynta bulshada waraaqahaaga iibka. Bixinta xiriiro ku saabsan markhaatiyada fiidiyowga waa hal dariiqo oo taas lagu sameeyo. Habkani waxaa lagu caddeeyey inuu si wax ku ool ah u wado iibka.
Markhaatiga fiidiyowga macaamiisha ah wuxuu horudhac u yahay badhanka CTA (Wicitaanka Ficilka) ee ay tahay in la dhigo meel ka hooseysa markhaatiga. Ujeeddadu waa in la isticmaalo xawaaraha shucuurta wanaagsan iyo dhiirigelinta ee markhaatigaagu u kiciyey daawadayaasha oo si dabiici ah u siinaya ikhtiyaarka ay ku iibsadaan (iyada oo loo marayo CTA)
Istaraatiijiyadda 3: Isticmaal Qalabka Isku-xidhka LinkedIn
Ma jiro meel uga fiican suuqleyda B2B inay ka faa'iidaystaan ​​oo ay diraan waraaqaha iibinta ee ka badan LinkedIn. LinkedIn waa barxad ganacsi oo ballaadhan halkaas oo dhammaan noocyada xirfadleydu isugu yimaadaan si ay wax u bartaan, ugu xiriiraan, kor ugu qaadaan ganacsigooda una suuq geeyaan wax soo saarkooda ama adeegyadooda. Waa suuq gaar ah oo leh fursado badan oo ay tahay in looga faa'iideysto istiraatiijiyadaada iibka.
Dad badan oo Qalabka otomaatiga ee LinkedIn kaa caawin kara inaad ku guuleysato heerarka sare ee shakhsi ahaaneed qaab hal abuur leh. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah qalabkani waxay bixiyaan shakhsiyeyn muuqaal si aad ugu dari karto magaca qofka qaataha ama sawirka astaanta ee ku dhex jira sawir, si aad uga dhigto mid shaqsiyeed. Qalabka otomaatiga ee 'LinkedIn' wuxuu kaloo ka takhalusi karaa macluumaadka saxda ah astaamahaaga bartilmaameedka 'wuxuu abuuri karaa farriimo shaqsiyeed iyo dareen leh sida aadanaha u qoray.
Istaraatiijiyadda 4aad: Ka dhig Khadka Furitaanka Shakhsiyeed
Hal qalad oo weyn markii la qorayo warqad iib waa salaanta aan ku habboonayn. Qofna ma jecla salaanta guud sida "Macaamiil qaali ah oo daacad ah" ama "Akhristaha qaaliga ah". Taabadalkeed, dhagaystayaashaadu waxay rabaan inay dareemaan qaas, ixtiraam, iyo loola dhaqmay si gaar ah.
Taasi waa sababta loogu daro magacyadooda iyo xirfadahooda (ganacsiyada B2B) salaantaada, waa hab hubaal ah oo lagu tusi karo inaad dhab ahaan lahadleyso qofkaas gaarka ah. Adoo tagaya "Dear Ben" ama "Dear Doctor Richards" ayaa kaa heli doonta waddo dheer waxayna hubin doontaa in qofka qaata uu doonayo inuu sii akhriyo warqaddaada.
Iyada oo dhagaystayaal badan, way adag tahay in gacanta qof walba si gaar ah wax looga qabto oo la qoro warqad kasta oo loogu talagalay iyaga. Taasi waa meesha otomaatiggu ku yimaado waxtar oo waqti badan ku badbaadiyo adoo gacanta ku ururinaya macluumaadka sida magaca, xirfadda, jinsiga, iwm.
Istaraatiijiyadda 5: U Adeegso Fiidiyowyada Iibintaada Iibintaada
Fiidiyowgu hadda waa midka ugu badan qaabab ka kooban waxyaabaha la jecel yahay taas oo kaxaynaysa kaqeybgal si layaab leh waxayna quusin kartaa dhagaystayaasha in ka badan qaab kasta oo kale. Waa inaad uga faa'iideysataa faa'iidadaada oo aad ku dartaa waraaqahaaga ganacsiga si aad uga dhigto iibkaaga iibka mid wax ku ool ah.
Muuqaalka fiidiyowga ayaa isla markiiba soo jiidan kara dareenka daawadayaasha isla markaana si dhammaystiran uga wada hadli kara mawduucyada aad sida caadiga ah uga hadli lahayd adoo adeegsanaya qaabka qoraalka. Fiidiyow ahaan, waxaad ku dari kartaa muuqaalada waxqabadka leh ee adeeggaaga ficil ahaan, muuji qanacsanaanta macaamilkaaga, ugu dambeyntiina, waxaad si qoto dheer ugula xiriiraan dhagaystayaashaada.
Qalabyo badan ayaa kaa caawin kara inaad sameyso fariin fiidiyoow ah oo shakhsi ahaaneed oo badan oo leh animations hodan ah iyo muuqaal indho qabasho leh, taas oo horseedi doonta beddelaad.
Istaraatiijiyadda 6: Isticmaal Waqtiga Tirinta
Waad ku dari kartaa saacadaha tirinta emaylkaaga iibka maadaama ay ku dhisi karaan dareen deg deg ah qofka wax aqrinaya. Saacadahaas waa in lagu dhejiyaa xagga sare, kana hooseeya cinwaanka, oo lagu dhisay muuqaal muuqda oo soo jiita dareenka.
Ujeedadaadu maaha inaad ku deg degto ee waa inaad soo bandhigto astaamaha ugu fiican ee alaabtaada oo aad adkeyso in waqtiga wax qabadku uu kooban yahay. Taasi waxay tiri, waxaad wali u baahan tahay inaad xal wax ku ool ah u hesho dhibcaha xanuunkooda iyo hab sax ah oo lagu soo bandhigo.
Halkan waxaa ku yaal Qaar ka mid ah Tilmaamaha Bixinta Iibinta Dheeraadka ah
Waa kuwan qaar ka mid ah tilmaamaha si aad uga dhigto waraaqahaaga iibinta ganacsiga inay guuleystaan ​​quluubta:
Hubso inaad ogaato dhagaystayaashaada oo aad si sax ah u kala qaybiso si aad u ogaan karto waxyaabaha gaarka ah
Abuur cinwaano adag iyo cinwaano hoosaadyo u dhigma nooca dhagaystayaashaada
Ku dar in ka badan hal CTAs halkaasoo ay dabiici tahay (ka hooseyso kanaga markhaati video, dhamaadka warqadda, iwm)
U isticmaal qabatooyin si aad ugu abuurto shucuurta akhristayaashaada
Adeegso sanduuqyada qarsoodiga ah intaad ku guda jirto warqaddaada si aad uga dhigto akhristayaasha inay wax badan u akhriyaan kuwa kale xali
Had iyo jeer dhig dalabkaaga bogga koowaad
Ha ku dhaafin macluumaadka, ku dar kaliya xaqiiqooyinka ugu fiican, astaamaha, iyo astaamaha kale ee gaarka ah ee alaabtaada iyo adeeggaagu leeyahay
Adeegso farsamooyin la xaqiijiyay sida Sanduuqa Johnson si loo muujiyo faa'iidooyinka dalabkaaga inta lagu gudajiray warqadda
Waa maxay sanduuqa Johnson?
Lixdan sano ka hor, khabiirka xayeysiinta ee Frank H. Johnson ayaa tijaabiyay haddii uu kordhin karo qiimaha jawaabaha waraaqihiisa iibka iyadoo loo marayo qaab loo yaqaan kalgacalka Johnson Box. Sanduuqa 'Johnson Box' wuxuu ku sheegayaa dalabkiisa cinwaan ka sarreeya salaanta.
Qoritaanka wacyigelinta ganacsiga weyn waa hab fikradeed oo dalbanaya. Erayadaada waa in si taxaddar leh loo qoraa, waxyaabaha ku jira si habboon loo qaabeeyey iyo aragtida ka dib akhriska waa inay ku qaylisaa "sheygan qiimo ayuu siinayaa".
Intaas waxaa sii dheer, isticmaalka hacks-ka ayaa badbaadin doona waqtigaaga isla markaana siin doona qaar ka mid ah dariiqooyinka si aad uga fogaato inaad gacanta ku qabato waxqabadyo aan xad lahayn. Hacks sidoo kale waxay ku dari kartaa taabashada shaqsiyadda iyo hal-abuurka waxyaabaha ku qoran warqaddaada iibka ah, oo loogu talagalay dhagaystayaashaada iyo waxyaabaha gaarka ah.
Nuqul iibka oo xoogan ayaa ah udub dhexaadka warqad ganacsi oo guuleysata iyadoo hal abuurnimo la adeegsanayo hacks waa albaabka lagu guuleysto quluubta dadka qaata.
Tags: waraaqaha ganacsigadib u qabsoWaqtiga tirintactaboostada tooska ahFrank johnsonfarsamada gacantagacmo-gacmeedadeegga warqad gacmeedgacanta lagu qorosida loo qoro waraaqaha iibkajohnson sanduuqaadeegga warqaddawarqad qoridotomaatiga ku xirankhadka furitaankatalooyinka fidintanuqul iibkaiibinta qoraalkawaraaqaha iibkagaadhsiinta iibkatalooyinka fidinta iibkafiidiyowyo loogu talagalay wacyigelinta iibka
David Wachs waa ganacsade taxane ah, David ganacsigiisii ​​ugu dambeeyay, Gacan ku qoro, ayaa dib u soo celinaysa farshaxannimadii luntay ee qorista iyada oo loo marayo cabirro, xalal robot ku saleysan oo qoraaladaada ku qora qalinka. Loogu talagalay madal ahaan, Handwrytten ayaa kuu oggolaaneysa inaad qoraal ka soo dirto nidaamkaaga CRM, sida Salesforce, websaydhka, barnaamijyada, ama isdhexgalka gaarka ah.